Previous Article Gọọmenti Anambra Amàlitela Ịkpọchisị Ụfọdụ Ụlọ Ọrụ Maka Atụghị Ụtụ Isi
Next Article Ụlọ Ikpe: Ụzọ Kachasị Mma Ịji Were Nweta Mmeri N'Ntuliaka Magomago Juru N'Ime Ya
Dịka oge udummiri na-akpụdobe n'ike, aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ emeela ka a mara na a ga-arụcha okporo ụzọ ahụ siri Ugwunwasike gaa Azụ Ogbunike-Amawa-Osile-Ifite-Gọvanọ Obianọ mere ka a mara nke a n'Ogbunike dị n'okpuru ọchịchị Oyi, oge ọ gara ileta ka ọrụ si aga na na ya bụ okporo ụzọ.
O gosìputara afọ ojuju ya banyere otu ya bụ ọrụ ngo si aga na ogoogo e ji arụ ya, ma mee ka a mara na a ga-etinye ọkụ okporo ụzọ na ya nwga ngwa a rụchara ya. O kwuru na ọchịchị ya ji ọrụ okporo ụzọ ruru kilomita iri anọ na ise na mpaghara ahụ, ma sị na mbize na-akpa ike na mpaghara ahụ bụ nke a ga-elebàrá anya nke ọma, were uche sochie ya azụ ma kpàá ya eze.
Ọ gara n'ihu kwuo na a na-edozigharị ebe ahụ e si abànye n'ọgbà Ogbunike na ime ka mma ya pụtakwuo ìhè, bụkwa nke ọ sị na ọ ga-enye aka ịdọta na ịkwàlìtè njèm nlegharị anya n'ebe ahụ. Ọ dụzịrị ụmụafọ Anambra ka ha jisie ike na nkwàdo ha na-enye ọchịchị ya, iji wee gaa n'ihu n'ọrụ ọma dị iche iche o ji n'aka na ya bụ steeti.
Na ntụnye nke ya, kọmishọna na-ahụ maka ọrụ na steeti ahụ, bụ maazị Marcel Ifejiọfọr kwuru na e nyechaala onye ji ya bụ ọrụ ngo ihe ndị kwesiri iji rụchapụ ya bụ ọrụ, ma mekwazie ka a mara na e teela ihe karịrị kilomita ise n'okporo ụzọ ahụ dị kilomita iri na abụọ. O gosipụtazịkwara ezi olile anya o nwere na a ọrụ ga-akụrụ ọnụ ebe ahụ n'oge a tụrụ anya ya.
Maazị Yinka Amosun, bụ onyeisi ụlọ ọrụ ngo ji ya bụ ọrụ kwèrè nkwà ịrụchapụ ma hafee ya n'oge e kwùrù na n'ogoogo kwesiri ekwesi, ebe kọmishọna na-ahụ maka njèm okporo ụzọ, bụ maazị Uchenna Okafor kwuru na a rụchaa ya, na okporo ụzọ ahụ ga-enye aka n'ịkwàlitè njem siriri werere na mpaghara ahụ.